विद्युतीय कार दिगो इ८ को मूल्य घट्यो, अब कति रुपियाँमा पाइन्छ ? - Parichaya.com
विद्युतीय कार दिगो इ८ को मूल्य घट्यो, अब कति रुपियाँमा पाइन्छ ?
By परिचय	 On २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १४:१७ 0
विद्युतीय सवारी ब्रान्ड दिगोले दिगो इ८, विद्युतीय ह्याचब्याक कारको मूल्य घटाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने महसुल र अन्तःशुल्क घटेसँगै कम्पनीले आफूसँग स्टकमा रहेका कारको मूल्य परिमार्जन गरेको छ ।
सरकारले गरेको यस सकारात्मक कदमको सर्हाना स्वरूप स्टकमा रहेको गाडीको समेत मूल्य परिमार्जन गरिएको दिगो इ८ कार खरिदकर्तालाई तत्कालै डेलिभरी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले कारको नयाँ मूल्य २१ लाख ९४ हजार ५०० तोकिएको जनाएको छ ।
नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारी साधानको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाउने घोषणा भएसँगै कम्पनीले दिगो इ८ को मूल्य परिमार्जन गरेको हो । दिगो इ८ यस सेग्मेन्टको ज्यादै लोकप्रिय कार हो ।
सीमा क्षेत्रबाट मदिरा बरामद
अक्सिजन उत्पादन गर्ने युनिट स्थापना गर्न क्रियसनलाई कोका–कोलाको सहयोग